ज्वरो आएर रूममै बसेका पराजुलीको अचानक निधन, आफ्नै जन्मदिनको दिन आफन्तले दिएको शुभकामना पनि पढ्न पाएनन् ! – नेपाली सूर्य
April 29, 2020 April 29, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on ज्वरो आएर रूममै बसेका पराजुलीको अचानक निधन, आफ्नै जन्मदिनको दिन आफन्तले दिएको शुभकामना पनि पढ्न पाएनन् !
पराजुलीको निधन हुँदाकै दिन उनको जन्मदिन परेको थियो सामाजिक संजालमा जन्मदिनको शुभकामना आउंदै गर्दा उनि भने यो संसारबाट सधैका लागि बिदा भैरहेका थिए । उनले आफ्नै जन्मदिनको दिन साथीभाई र आफन्तको पनि शुभकामना न त पढ्न पाए न त देख्न पाए । etajakhabar
दुई जना बारामा र एक जना वीरगन्जमा देखियो कोरोना, संक्रमित ५७ पुगे